Minisiteran’ny Fanatanjahantena: notendrena ho tale jeneraly i Rosa | NewsMada
Minisiteran’ny Fanatanjahantena: notendrena ho tale jeneraly i Rosa
Notanterahina, omaly zoma tetsy amin’ny efitranon’ny minisiteran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena, ny famindram-pahefana, teo amin’ny tale jeneraly teo aloha, Rabibisoa Anselme, sy ny tale jeneraly vaovao, Rakotozafy Rosa. Tsy olona vaovao ao amin’ny minisitera i Rosa fa efa nitana ny andraikitry ny talen’ny fanatanjahantena federaly, nanomboka ny taona 2014.
Olona nilomano sy niaina tao anaty fanatanjahantena, hatramin’ny fahazazany, i Rosa, izay efa atleta nandrombaka ny ho tompondakan’i Afrika, ary vehivavy Afrikanina voalohany nomen’ny Komity olympika iraisam-pirenena (CIO) diplaoma noho izay fitiavany ny fanatanjahantena izay. Tsy hadinon’i Ros, ny nisaotra ny filoham-pirenena sy ny minisitra Tinoka Roberto amin’izao nanendreny azy hitana andraikitra makadiry izao indray. Nanome toky ny tenany fa hanao izay ho tratry ny heriny amin’ny fampandrosoana ny fanatanjahantena malagasy.
Ankoatra izay, nisy ihany koa ny famindram-pahefana teo amin’ireo sampana hafa toy ny tale misahana ny fitantanana ny vola, ny an’ny tale rezionalin’ny tanora sy ny fanatanjahantena ary ny an’ny talen’ny fitantanana ny mpiasa. Notapahina teo anivon’ny filankevitry ny minisitra, ny alarobia lasa teo, ireo fanendrena ireo.